HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Chichewa Chol Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Garifuna Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hindi Holandey Hongroà Ibo Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Kinyarwanda Kirundi Konkani (Romanina) Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Malezianina Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Maya Nahuatl (Afovoany) Norvezianina Nzema Otomi (Lohasaha Mezquital) Persianina Poloney Portogey Rarotonga Romanianina Rosianina Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tajiki Tarasque Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Valencienne Xhosa Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal
Zava-baovao any Manhattan
Nanomboka ezaka manokana ny Vavolombelon’i Jehovah vitsivitsy, tamin’ny Novambra 2011, mba hampahafantarana ny hafatra ao amin’ny Baiboly amin’ny olona any Manhattan. Latabatra sy tabilao fampirantiana tsara tarehy no ampiasan’izy ireo amin’izany. Any amin’ny faritra atsimon’i Manhattan, izay tanànan’i New York tranainy indrindra sy be olona mifamezivezy indrindra, no anaovana an’ilay ezaka manokana.
Nozarain’izy ireo ho faritra efatra ilay toerana. Misy toerana maromaro ahitan’ny mpandalo latabatra milamina tsara na tabilao feno boky ara-baiboly, isaky ny faritra tsirairay, ary misy mpitory manontolo andro eo. Any amin’ny toerana fiantsonan’ny fitateram-bahoaka na eny akaikiny ny ankamaroan’izy ireny, ary olona an’aliny no mandalo eny isan’andro.
Eny amin’ireny toerana ireny ny olona no mahazo ny valin’ny fanontaniana maro ara-baiboly. Afaka maka boky eo fotsiny ilay olona ary mamaky azy amin’ny fotoana hafa raha tsy te hijanona ela eo.
Misy amin’ny fiteny maro ireo boky. Azo hafarana ilay izy raha tsy misy amin’ny fiteny tadiavin’ilay olona, ary azony alaina eo afaka andro vitsivitsy.
Tian’ny olona ilay ezaka manokana, anisan’izany ny manam-pahefana. Hoy ny polisy iray: “ Fa maninona ianareo no izao vao nanao azy ity? Tena ilain’ny olona io ataonareo io. ”
Nijanona tampoka ny lehilahy iray rehefa nahita ny boky Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly? Nahita olona namaky an’ilay boky, hono, izy teny an-dalana dia nieritreritra hoe taiza no nahazoan’ireny olona ireny an’ilay izy. Izao vao fantany hoe taiza.
Nandalo teo amin’ny iray amin’ireny toerana ireny foana ny lehilahy tanora iray isan’andro rehefa nandeha niasa, nandritra ny iray volana sy tapany. Nijanona teo izy ny farany ary niteny hoe: “ Mila fanampiana aho. ” Faly nanampy azy ny olona niandraikitra an’ilay toerana. Nomen’izy ireo Baiboly izy ary natoro azy hoe ahoana no handraisany soa amin’ilay izy.
Maro ny mpandalo liana ka mijanona eny amin’ireny toerana ireny ary miresaka momba ny Baiboly. Vao haingana, dia gazety 3 797 sy boky 7 986 no nozaraina tamin’ny olona, tao anatin’ny iray volana monja, noho ilay ezaka manokana any Manhattan.